Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israa'iil ayaa qarka u saaran inay soo saarto buufin cusub oo difaaca hawada ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Israa’iil ayaa sannadihii u dambeeyay aad uga shaqaynaysay sidii ay u wanaajin lahayd difaaceeda cirka, sababo la xidhiidha walaaca ay ka qabto ku soo badanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ee ay Iran ku samayso gobolka Bariga Dhexe. Yahuudda ayaa sidoo kale inta badan waxaa lala beegsadaa gantaallada cooshadaha ka sameysan iyo buufinnada dabka dhaliya, kuwaas oo ay ka soo tuuraan Qaza kooxda argagixisada Falastiin ee Xamaas.
Nidaamka cusub ee gantaalaha iyo diyaaradaha lagu baaro gantaalada casriga ah ayaa sii kordhin doona awooda difaaca cirka ee Israel.
Dew-ka Sky Dew waxa uu ammaani doonaa nidaamka ogaanshaha ee ku salaysan dhulka Israa’iil ee jira iyadoo la gelinayo dareemayaal dheeraad ah meel sare.
Nidaamkan oo ay si wada jir ah u soo saareen Israa’iil iyo Maraykanku, waxa uu maray tijaabooyin lagu guulaystay bilihii la soo dhaafay.
Wasaaradda difaaca ee Israa’iil ayaa ku dhawaaqday in ay isu diyaarinayso in ay riddo finan wayn oo qaadi doona hab casri ah oo difaaca hawada ah.
Wasaaraddu waxay daabacday muuqaal online Arbacadii, kaasoo muujinaya buufin weyn oo dhinacyo kala duwan laga soo buufiyay.
Sida laga soo xigtay wasaaraddu, nidaamka cusub ee gantaalaha iyo diyaaradaha lagu ogaado ayaa sii kordhin doona awoodda difaaca hawada ee Israel.
Ilaa hadda si rasmi ah looma shaacin qaabka ay u dhacday diyaaraddan oo loogu magac daray ‘Sky Dew’, balse waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu weynaa ee nooceeda ah. Raadaaradeeda ayaa la sheegay inay awood u yeelan karaan inay ogaadaan gantaalada riddada dheer ee imanaya, gantaalaha cruise-ka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Nidaamka, oo ay si wadajir ah u soo saareen Israa'iil iyo US, ayaa bilihii la soo dhaafay maray imtixaano lagu guuleystay, waxaana la qorsheynayaa in dhawaan laga hirgeliyo waqooyiga dalka, sida ay sheegtay wasaaradda.
Sky Dew waxay kaabi doontaa nidaamyada ogaanshaha dhulka ee Israel ee jira iyadoo la gelinayo dareemayaal dheeri ah meel sare. Raadarada sare ee noocan oo kale ah waxay bixiyaan faa'iido teknoloji iyo hawleed oo muhiim ah oo loogu talagalay ogaanshaha khatarta hore iyo saxda ah.
Wasiirka difaaca Israa'iil Benny Gantz ayaa bogaadiyay boobka "horumar kale oo tignoolajiyadeed oo xoojin doona difaaca cirka Israa'iil iyo muwaadiniinta Israa'iil." Nidaamka cusub "wuxuu xoojiyaa derbiga difaaca ee Israa'iil ay ka dhistay khatarta hawada fog ee soo socota ee ay dhisayaan cadawgeeda," ayuu yidhi.
Dhimashada dhinaca Israa'iil ee rasaasta xooggan ee ay isweydaarsadeen, intii lagu guda jiray is-rasaasayn dhexmartay Israa'iil iyo Xamaas bishii May, ayaa gaadhay 12 qof oo ay ku jiraan laba carruur ah.